Mala socotaa sababta Itoobiya ay AMISOM uga mid noqonayso – IFTIINI SOMALIA
TOP NEWS: Mala socotaa sababta Itoobiya ay AMISOM uga mid noqonayso (XOG)
November 15, 2013 – Waxaa Qorey : Tafatiraha Balcad –
Xog cusub misane ku saabsan sababta rasmiga
ah ee ka dambeysay in ciidamada Itoobiya ay ugu soo biiraan AMISOM.
Qorshahaan waa mid muddo badan laga soo shaqeynaayay, waxaana wada rag ka mid ah dowladda
Soomaaliya, waana mid lagu jabinaayo ciidamada Kenya.
Tusaale Itoobiya hadda waxaa dalka ka ajooga ciidamo badan, hase ahaatee hadii ciidamadeeda AMISOM
noqdaan, waxaa sahlanaaneysa inay tagaan meelo badan oo dalka ka mid ah.
Waxay ka haowlgali doonaan gobalada Jubooyinka iyo Gedo iyadoona ciidamo kumanaan gaaraya ay dalka
soo gelin doonaan.
Howlgalka halka ay hadda Kenya dhanka Koonfurta ka hasyo waxaa la wareegi doona kuwa Itoobiya,
iyadoona Kenya laga yaabo meelo kale in laga rido.